khaliilberberawi's blog - Page 5 - khaliilberberawi's blog - Skyrock.com
Dagaal u dhaxeeya Ciidamada Xisbul Islaam ee gobolka iyo Ciidamo taabacsan Culumaa'udiinka Ahlu Sunna oo haatan ka soconaya gudaha Baladweyne.
Dagaal Mudo Saacado ah qaatay Islamarkaana u dhaxeeya ciidamada Xisbul Islaam ee gobolka Hiiraan iyo Ciidamo tabacsan Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa haatan waxaa ay ka soconayaan Xaafadaha Bari ee Magaalada Bladweyne.
Wararka laga helayo Magaalada Baladweyne ee Xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in gudaha Magaaladaasi uu ka socdo dagaal xoogan uu u dhaxeeya ciidamada Ururka Xisbul islaam iyo ciidamo kale oo taabacsan Culumaa'udiinka Ahlu Sunna Waljamaaca kuwaasi oo dagaalkoodu uu ilaa maanta barqadii soo socday.
Dagaalka ayaa waxaa la sheegayaa in la isku adeegsanayo hubka nuucyadiisa kala duwan waxaana uu yimid kadib markii Ciidamada culumaa'udiinka Ahlu Sunna Waljamaaca ay Maanta barqadii weerar ku soo qaadeen Ciidamada Xisbul Islaam oo xiligaas ku sugnaa nawaaxiga Garoonka diyaaradaha ee Ugaas Khaliif ee Magaalada Baladweyne.
Wararka qaar ayaa sheegaya in dagaalka ay ku lug leeyihiin ciidamo ka tirsan dowladda KMG ee Soomaaliya kuwaasi oo la safan kuwa culumaa'udiinka Ahlu Sunna,iyadoo ilaa iyo hadda aan la ogayn qasaaraha dadka shacabka ah ka soo gaaray dagaalkaasi iyo sidoo kala kan soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay kuwaasi oo mudo saacado ah halkaasi ku dagaalamaya.
Dagaalka ayaa waxaa ka hadlay Labada dhinac ee dagaalamaysa waxaana Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan ee Ururk Xisbul Islaam Shuuriye Faarax Sabriye oo saxafada ay la xariirtay uu sheegay in dagaalku uu ahaa mid ah horay ugu diyaar garoobeen isagoo intaasi ku daray in dagalku uu ka socdo gudaha Magaalada Baladweyne ee Xarunta gobolka Hiiraan.
Dhinaca kale Aadan Cabule Cawale oo ka mid ah Culumaa'diinka Ahlu Sunna Waljamaaca horayna u ahaa Masuuliyiintii degmada Maxaas ee dowladda KMG ee Soomaaliya oo isna saxafada la hadlayay ayaa sheegay in dagaaladaani ay soo qaadeen ciidamada Culumaa'udiinka Ahlu Sunna waljamaaca,waxaana uu tilmaamay in dagaalka markii hore uu ka bilowday bariga Magaalada Baladaweyne hase ahaatee uu haatan soo galay islamarkaana uu ka socdo qeybo ka mid ah Xaafadaha Magaalada Baladweyne.
Ciidamada Culumaa'udiinka Ahlu Sunna ayaa maant barqadii weerarka ka soo qaaday wadada dheer ee Magaalada Baladweyne ka gasha dhinaca Buurta Jante kundhishe waxaase la sheegayaa in ay haatan hakad ku jiraan dhaq dhaqaayadii gaadiidka ee Xaafadaha bari ee Magaalada Baladweyne gaar ahaan Xaafadaha Nuur Xawadle,Xaawo Taako iyo kuwa kale halkaasi oo dagalada si weyn looga maqlayo.
Marka laga soo Tago hadalada Masuuliyiintani ayaa wararka laga helayo Magaalada Baladweyne waxaa ay sheegayaa in haatan halkaasi ay ka socdaan dagaalada waxaana guud ahaan magaalada si weyn looga maqlayaa dhawaqa rasaasta ay is weydarsanayaan labada dhinac.
Dagaalka ayaa daqiiqado yar istaagay waxaana uu dib u bilowday kadib markii ay soo rogaal celiyeen ciidamada Culumaa'udiinka Ahlu Sunna Waljamaaca oo wararka qaar ay sheegayaan in ay cawinayaan ciidamo ka tirsan dowladda KMG ee Soomaaliya.
wariye Maxamed C/raxiim Xasan (Fowz) miqdisho-somalia
# Posted on Sunday, 10 January 2010 at 10:57 AM
Dowladda Ethiopia oo sheegtay in Caga jugleynta Xarakatu Shabaabul Mujaahidiin ay u baahantahay Jawaab deg deg ah oo caalami ah.
Xukuumadda Ethiopia ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay in dhaq dhaqaaqyada iyo Caga Jugleyngta Dhinacyada ka dagalama Soomaaliya ee ka soo horjeeda dowladda KMG ay u baahantahay jawaab deg deg ah oo Caalamku uu ka bixiyo si looga hortago Qatar arintaasi ka dhalata.
Hadalkaani qoraalka ah oo la soo galiyay Bogga Internet-ka ee ay ku leedahay wasaaradda arimaha dibadda ee dalka Ethiopia ayaa lagu sheegay in Caalamku sanadyo badan uu ku gaabsaday in uu dusha kala socdo dhacdooyinka Soomaaliya islamarkaana ay si gaabis ah ku socdeen la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada Soomaaliya.
Hadalkaani qoraalka ah ayaa intaasi ku daray in natiijadii arintaasi ka dhalatay ay noqotay in Soomaaliya maanta ay gacanta u gashay Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab sida ay sheegtay Wasaaradda arimaha dibadda ee Ethiopia.
Wasaaradda arimaha dibadda ee Ethiopia ayaa sidoo kale sheegtay in ay aad uga xuntahay qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ee sanadkii la soo dhaafay ka dhacay Magaalada Muqdisho kuwaasi oo ay ku geeriyoodeen Masuuliyiin ka tirsan dowladda KMG iyo dad rayid ah,waxaana ay ugu baaqday wadamada Reer Galbeedka in ay dusha u ritaan Masuuliyadda ka saaran guud ahaan Caalamka gaar ahaan Soomaaliya islamarkaana aanay amaanka Caalamka ka ilaalin gudaha Wadamadooda oo kaliyah.
Hadalka dowladda Ethiopia ayaa imaanaya xili Maalmo ka hor golaha amniga iyo nabad galyada Midowga Africa ay meel mariyeen qaraar waqtiga loogu kordhiyay ciidamada AMISOM ee jooga Magaaladsa Muqdisho iyadoo horay Xarakada mujaahidiinta Al Shabaabna ay ugu hanjabeen in ay ciidamo u dirayaan Wadanka Yemen si ay u taageeraan kooxo islaamiyiin ah oo halkaasi ka dagaalama.
wariye Maxamed C/raxiim Xasan (Fowz) Muqdisho-Somali
# Posted on Sunday, 10 January 2010 at 9:18 AM
Edited on Sunday, 10 January 2010 at 9:54 AM
Dagaalo maanta ka dhacay waqooyiga Muqdisho iyo Xarakada Mujaahidiinta AL Shabaab iyo dowladda oo guulo ka kala sheegtay dagaaladaasi.
Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab iyo Taliska Militariga dowladda KMG ee Soomaaliya ayaa guulo kala duwan ka sheegtay dagaal maanta ka dhacay Xaafadaha Waqyooyi ee Magaalada Muqdisho.
Kadib Dagaal xoogan oo u dhaxeeyay Ciidamada dowladda KMG ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo isku dhinac ah iyo Xarakada Mujaahidiinta AL Shabaab islamarkaana ka dhacay degmooyinka Waqooyi ee Magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan waxaa uga hadlay dagaaladaasi dowladda KMG iyo Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab
Dagaalka ayaa waxaa uu geystay Qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana uu xoogiisa ka dhacay agagaarka Hoteel Golobal halkaasi oo la sheegay in ay weerarada ka soo qaadeen ciidamada AMISOM oo la sheegay in ay wateen Taangiyo iyo Gawaarida kale ee dagaalka.
Inta la ogyahay sedax qof ayaa ku dhimatay tiro kalana waa ay ku dhaawacmeen rasaastii iyo Madafiicdii ay isku weydaarsanayeen labada dhinac ee dagaaladu ay u dhaxeeyeen.
Waaliga Wilaayada gobolka Banaadir ee Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab Sheekh Cali Xuseen Fiidow oo war kooban saxaafadda siiyay ayaa sheegay in ay soo weerareen ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda hase ahaatee ay iska difaaceen islamarkaana ay qasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira ay u geysteen dhinacyadii soo weeraray.
Dhinaca kale Aadan Max'ed Ibraahim Kaalmooy oo ah afhayeenka ciidamada militariga dowladda KMG ee Soomaaliya ayaa isna waxaa uu saxafada sheegay in dagaalkaasi uu ahaa mid kooban islamarkaana aanay wax qasaare ah soo gaarin ciidamada dowladda isagoona sheegay in aanay waxba ka ogeyn qasaare soo gaaray dhinacyadii dagaalka kula jiray.
Degmooyinka Waqooyi ee Magaalada Muqdisho ayaa mudooyinkan dambe waxaa ay daris u noqdeen dagaalo joogto ah oo halkaasi ku dhexmara ciidamada dowladda kuwa AMISOM oo isku dhinac ah iyo xoogaga ka soo horjeeda iyadoona degmooyinkaasi xiliyadii u dambeeyay ay ka barakaceen dad fara badan oo halkaasi deganaa kuwaasi oo ilaa iyo hadda aan dib ugu soo laaban guryahoodii.
# Posted on Sunday, 10 January 2010 at 9:16 AM
WAR DEG DEG AH;- boliska somaliland oo gacanta ku dhigay nin argagixiso ah ihubkii uu damacsanaa inuu isku qarxiyo..
ciidamada somaliland waxa ay maanta qabteen nin isku dayeey inuu qarxiyo madaras ku taala xaada xawaadle ee magalada haragaysa taas oo wakiil ka yahay sheekh aadan siro si kartaba ahaate waxa halkaa ka dhawaa musjidka uu qudbada ka akhriyo shiikhu iyada oo la damacsaa in sheekha la dilo hadaba waxa dhacdada iyada ahayd ka hortagay haweenay muwadinad ah taas oo qabatay ninka argagixisada ah halka kii kale ka baxsaday ninkan oo ay qabatay ayaa ku yidhi hadii aad isiin dayn waydo waan is qarxinayaa waa sida uu hadalka udhigaye ,
cidamada somaliland waxa ay hada gacanta ku hayaan hub iyo nin agagixiso ah hubkaas oo iskugu jira hoobiyayaal iyo gantaalo 40milimiter ah hadaba ma aha markan uun in ciidamada somaliland ay qabtaan argagaxisada
# Posted on Saturday, 09 January 2010 at 2:26 PM